Ignkwado Digital na Omenala: Obere Ihe
Mọnde, Febụwarị 22, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Matt Chandler
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ azụmahịa na-eme mkpesa ọtụtụ ugboro na aka nri amaghị ihe aka ekpe na-eme. N'ụwa nke taa itinye n'ịntanetị na mgbasa ozi ọdịnala, ihe ịtụnanya a gosipụtara karịa.
Ntị zuru ezu na usoro nkwukọrịta mgbe niile dị mkpa na ụlọ ọrụ ọ bụla, obere ma ọ bụ obere. Nmehie dị mfe nke na-akpata nkata nkwukọrịta dị nkenke ma ọ bụ njehie ederede kachasị pere mpe nwere ike ịba uru dị ukwuu.
Ka ihe atụ: Denny si ụlọ oriri na ọụ .ụ. Nri nri nri ohuru ha ebiputara ma kesaa na njedebe nke ikpeazu bu CTA Soro mkparịta ụka ahụ na ibe Denny nke Facebook na Twitter, na weebụsaịtị ha. Otu obere nsogbu: edepụtara ID Twitter.
Dị ka a akụkọ CNET na-adịbeghị anya, menus kesara gburugburu 1,500 Denny ebe na mba niile depụta akara Twitter nke otu nwoke na Taiwan. Denny's na-arụ ọrụ na Twitter iji chee ID ahụ, nke na-adịghị arụ ọrụ kemgbe ọnwa isii.
Ihe omume a gosipụtara mkpa maka nkwurịta okwu n'etiti ogwe aka dijitalụ na nke ọdịnala nke ịzụ ahịa. N'eziokwu, ọtụtụ ndị na-anọdụ ala na nri abalị nwere ike agaghị achọ Denny na Twitter mgbe ha nọdụrụ na tebụl. Mana ụdị snafu a na ọnọdụ ọzọ nwere ike bụrụ ọdachi.
O nwere ike ịdị ka ọ dị mma iche na Denny ga-edebanye aha twitter.com/dennys, dịka ha nwere dennys.com. Ma ha emeghị ya, ị marakwa ihe ha na-ekwu gbasara ihe na-eme ma mmadụ buru iwe n’obi.
Gịnị ma ọ bụrụ na e mee otu ụdị ihe ahụ na ntụpọ TV ma ọ bụ mbipụta mbipụta? Ma ọ bụ na akwụkwọ ozi ma ọ bụ ozi nzi ozi ma ọ bụ akwụkwọ ozi? Ahịa na Nkwukọrịta ga-adị na mmekọrịta, na mmekọrịta mgbe niile na mmekọrịta iji gbochie ụdị mmejọ a site na imebi ọbụna mbọ ahịa mmekọrịta mmekọrịta kachasị mma.
Mbipụta menu ọhụrụ nwere ike ọ gaghị apụta na-akpọ maka ntinye nke otu mmekọrịta. Mana ugbu a, ngwa ọrụ ụlọ akwụkwọ kacha ochie nwere ụfọdụ ihe dijitalụ, dịka URL. Ma ogwe aka nke nkwukọrịta – nke ọdịnala na nke dijitalụ-ga-esonye na atụmatụ atụmatụ nke ọrụ ọ bụla iji hụ na otu jikọrọ ọnụ dị.
Tags: denny siFacebookTwitter
Matt bụ Digital Content Manager maka Teknụzụ Nche na Ingersoll Rand, na bụ onye nkuzi adjunct nke Web Marketing na Artlọ ihe osise nke Indianapolis. Ọ nwere ihe karịrị afọ 10 nwere ike ịmepụta atụmatụ na ijikwa ọdịnaya ịntanetị maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gụnyere Udiri, Ulọ Ọrụ Ahụike NYU Langone na Community Health Network. O nwekwara mkpokọta vinyl na-atọ ọchị na pug aha ya bụ George Benson.
Nnwere onwe nnwere onwe: ofdị CMS dị iche